Yintoni isantya sokulungisa amagama? - Faq
Eyona > Faq > Isantya seprosesa yamagama-iimpendulo eziqhelekileyo kunye nemibuzo
Isantya seprosesa yamagama-iimpendulo eziqhelekileyo kunye nemibuzo
Yintoni isantya sokulungisa amagama?
AmagamaNgomzuzu, i-wpm edla ngokushunqulelwa (ngamanye amaxesha i-WPM ephezulu), ngumlinganiso weamagamaiqhutywe ngomzuzu, ihlala isetyenziswa njengomlinganiso weisantyayokuchwetheza, ukufunda okanye ukuthumela ikhowudi yeMorse kunye nokwamkela.
Yonke ikhompyuter yanamhlanje yenza into efanayo.
Ndakhe ndathi ngaphambili ukuba iikhompyuter zizele nje iikhalityhuleyitha, kodwa ufumana njani kwisibali sokudlala ukuze udlale imidlalo yenqaku kunye nosasazo? Ukusasaza izinto kwi-intanethi, okanye ukudibanisa nokudibanisa izigidi zeepekseli kweli nqaku? Ngamafutshane, yenza ntoni ikhompyuter yakho? Kukho ingxelo eyandisiweyo yekhompyuter emva kwam, kodwa siya kuhamba kakhulu, kube lula. Ukuba uyakwazi ukwahlula ifowuni okanye iPC yakho, kukho iyunithi yokuqhubekeka esembindini okanye i-CPU kwenye indawo entliziyweni edityaniswe nazo zonke ezinye izixhobo ezenza ukuba isebenze. Ewe, ukubonisa umzekelo olula, asizukuhamba sisebenzisa zonke izixhobo.
Eyokuqala esiza kuyisebenzisa yiwotshi. Ngalo lonke ixesha iwotshi ikhathaza, i-CPU yethu ibaleka inyathelo elibizwa ngokuba 'Landa-Phumeza' umjikelo okanye 'Landa-Decode-Phumeza'. Le wotshi inomlingo omncinci njengoko ikhathaza (cofa) ngalo lonke ixesha ndicofa iminwe yam. (Cofa) (cofa) ndiya kuba neerejista ezintathu kwi-CPU.
Ezi zizinto zememori yesantya esiphezulu apho i-CPU ibambe amaxabiso asebenza kuwo ngoku. Ezi zezi: irejista enye egcina umkhondo womjikelo wethu wokufundisa, enye ilayisha imiyalelo yethu kwimemori nakwisiqokeleli. Into yokugqibela esiyifunayo kwikhompyuter yethu elula yindawo yokugcina imiyalelo kunye nawaphi na amaxabiso esiwabalayo.
Le yi-RAM, iMemori yokuFikelela ngokungaQhelekanga. Sikubiza ngokuba kukufikelela ngokungacwangciswanga kuba iyakwenza oko nokuba ulwazi lufundwa okanye lubhalwa nini. Ke: le yikhompyuter yethu.
Masisebenzise inkqubo elula. Yonke into eya kuyenza kukubala. Iprosesa inamanyathelo amathathu: ukubuyisa, ukumisela, ukwenza.
Iya kuphinda-phinda oku kwilog, yiyo kuphela kwento eyakhelwe ngaphakathi kuyo. Ke sifuna imiyalelo ethile, eneneni kwimemori, ke siyilayisha inkqubo yethu kwi-RAM. I-RAM ikwasetyenziselwa ukugcina iimpendulo zethu, iindleko zethu.
Kwilizwe lokwenyani, zonke ezi ziya kugcinwa kubini, kodwa masingazenzi izinto zibe nzima ngoku, masizigcine zifundeka ebantwini. Umyalelo uqulethwe ngamacandelo amabini. Inxalenye yokuqala ngumyalelo ngokwawo.
Inxalenye yesibini ihlala idilesi yememori. Ngalo lonke uphawu lwewotshi, i-CPU yenza enye yezinto ezintathu: Ifumana umyalelo kwidilesi yememori. Iya kuchaza loo myalelo.
Kwaye uya kuyenza imiyalelo. Ujikeleze kwaye ujikeleze kwiluphu. Ke kubalwa.
Siqala ngenombolo kwaye siqhubeka ukongeza enye kuyo. (Cofa) Ukufumana kwakhona. Umgca webar.
Ikhawuntala yenkqubo isetelwe ku-0 ukuze i-CPU ilande umyalelo kwidilesi 0 kwimemori kwaye igcinwe kwirejista yomyalelo. (Cofa) Cacisa. I-CPU imisela umthetho.
Inxalenye yokuqala ngumyalelo kwaye icandelo lesibini kwimeko yethu ngumyalelo we-LOAD kwaye idilesi ngu-6. Ke thina silayisha ixabiso ledilesi 6 kwisiqokeleli. (Cofa) Phumeza.
I-CPU iphumeza lo myalelo. Ithatha ixabiso kwidilesi ye-6 kwaye ililayishe kwi-accumulator. Kule meko ixabiso li-1 (cofa) Landa.
Ikhawuntala yenkqubo iyonyuswa kwaye i-CPU ilanda umyalelo olandelayo kwinxalenye elandelayo yememori. (Cofa) ukumisela. I-CPU imisela imiyalelo.
Eli xesha li-ADD kwaye idilesi ingu-7. Ke sidibanisa idilesi yesi-7 kwinto esele ikwisiqokeleli. (Cofa) Qhuba.
I-CPU yenza lo myalelo. Songeza ixabiso kwidilesi 7. Kule meko lixabiso 1.1 + 1 ngu-2 (cofa) Landa.
Ukusuka kwinombolo yendawo yenkumbulo elandelayo ((cofa) Cazulula. Umyalelo wokugcina ixabiso kwi-accumulator kwi-RAM Idilesi 6. (cofa) phumeza.
Ewe, Qaphela ukuba sibhala ngaphezulu esele ikhona, ke idilesi yesi-6 ngoku ine-2 endaweni ka-1 (cofa) Landa. Umyalelo omtsha: Xhuma.
Ngokutsiba kube nye, idilesi elandelayo, kule siyifumanayo yile ikule ngxelo. (Cofa) Cacisa. Ke siyaxhuma kwidilesi 1. (Cofa) Phumeza.
Ikhawuntari yenkqubo ngoku ibuyele ku-1.Ukwazi ukutsiba, ukujija, kunye nokuphinda wenze imiyalelo yenye yezinto ezisisiseko zenzululwazi yekhompyuter. Ke: sibuyile. (Cofa) Fumana kwakhona indawo 1. (Cofa) Cazulula.
Ngumyalelo we-ADD kwakhona. (Cofa) Phumeza. Isihlanganisi sethu sisaqulathe amaxabiso ngaphambili, oko kukuthi: 2 + 1 = 3. (Cofa) Fumana. (Cofa) Cacisa.
Sindisa kwakhona. (Cofa) Phumeza Gcina kwindawo yendawo 6. (Cofa) Fumana. (Cofa) Cacisa. (Cofa) Phumeza.
Kwaye sitsibe kwakhona. (Cofa) Chaza. (cofa) Phumeza. (cofa) Fumana. (Cofa) Chaza. (Cofa) Phumeza. (Qhubeka ucofa) Sisemngxunyeni, sibala nganye nganye kumjikelo wesithandathu wewotshi. (eyeka ukunqakraza) Ngale miyalelo ilula, inkqubo yethu ayinayeka wokumisa okanye nayiphi na indlela yokuyiphazamisa, ke inyusa nje eli xabiso ngomnye (kunqakraza ngokukhawuleza okuninzi) de inani likhule ngokwaneleyo ukuba lingenakubanjwa idilesi yememori.
Iphuka njani ke ... kulungile, lelo linqaku elahluke ngokupheleleyo. (eyeka ukucofa) Kwaye iminwe yam idiniwe.
Le yeyona ndlela inqabileyo yokwenza inkqubo kwikhompyuter. Kwithiyori inokuba njalo, kodwa kweli nqanaba le miyalelo ibhalwe kuphela kwi-data eluhlaza ekrwada engafundekiyo ebantwini.
Inyathelo elilandelayo ukusuka kuloo lulwimi lokomfuziselo olubizwa ngokuba yiNdibano, efundeka ngakumbi kodwa isondele ekusebenzeni kwinyithi engenanto. Umdlalo wokuqala weNkosana yasePersi wacwangciswa ngokupheleleyo kulwimi lwendibano. Oku phantse kungakholeleki kum: ukucingisisa ngononophelo yonke ipikseli yoopopayi kunye nokuyifaka kwikhowudi kwinto eqondwa ngqo yikhompyuter ngokuthe ngqo.
Inkqubo enjalo inzima kwaye inzima, kwaye ithambekele kwimpazamo yomntu, ekhokelela kwiingxaki ezinkulu zokhuseleko. Kunzima ukwenza inkqubo kwaye kunzima ukulungisa ingxaki. Endaweni yokujongana nobunzima okanye, ewe, ingqiqo yentsusa yekhowudi yomatshini, iilwimi ezikumgangatho ophezulu zaphuhliswa njengenyathelo eliphakathi.
Ezi lwimi zisenzela konke ukufundwa nokubhalwa kwememori kuthi, ke kuya kufuneka sigxile koko sifuna ukuba kwenziwe yikhompyuter. Nantsi ke ikhowudi yam: Ngokuchanekileyo imiyalelo efanayo, ebhalwe ngendlela eyahlukileyo, enamagama ukuze abantu bakwazi ukufunda. Ndicacisa umahluko, X.
Emva koko ndibhala umsebenzi ophuma ngokungagungqiyo kwaye ngalo lonke ixesha udlula kuloo loop ndonyusa u-X ngo-1 Nje ukuba ndibhale le khowudi, ndiyigqithisela kumqokeleli oyiguqulela kule khowudi yoqobo yam. Xa ndiqhuba inkqubo ilayisha kwimemori yekhompyuter kwaye ibaleke.
Ukuba ndifuna ukuyiqhuba kudidi olwahluke ngokupheleleyo lwekhompyuter, iMac endaweni yePC, ndingayiqokelelela loo CPU endaweni yoko. Kodwa ayisiwuphenduli umbuzo wendlela ikhompyuter eyenza ngayo into enzima njengokucinezela nokubukela eli nqaku. Impendulo yile: isantya.
Kwisantya endicofe kuso, sigqibe ukwenza umyalelo ngentambo yonke imizuzwana embalwa, enye yenkqubo. I-CPU yanamhlanje iphumeza imiyalelo yeebhiliyoni ngomzuzwana- gigahertz- kwimisonto emininzi. Kodwa entliziyweni ye-pc yakho okanye ifowuni, kusekho iwotshi yokuphawula kunye nomjikelo wokuphunyezwa kokulanda iminyaka umphathi wegama eligqithisiweyo, kwaye ukuba ubuchwephesha bokwazi ngokwaneleyo ukufikelela esiphelweni seli nqaku, nawe kufanelekile.
Kwaye anditsho nje kuba eli nqaku lixhaswe nguDashlane, umphathi wegama eligqithisiweyo, kwaye ukuba uya ku-dashlane.com/tomscott baya kufumana ityala leentsuku ezingama-30 zasimahla zenguqulo yabo yeprimiyamu. Kutheni le nto kufuneka usebenzise iDashlane? Ewe, okokuqala, ukusebenzisa kwakhona amagama agqithisiweyo ngumbono ombi.
Ukuba ufana nam kwiminyaka embalwa eyadlulayo, usebenzisa iipasile ezifanayo kakhulu ngoonobumba abambalwa abatshintshileyo, okanye igama lesiza lilapho kwenye indawo. Ayisiyonto intle. Ukophula idatha kwenye yezi ndawo kuya kuba lixesha lokukhathazeka.
Ezi ntsuku uDashlane ukwisikhangeli sam kwaye nanini na xa ndifuna ukungena naphi na, ndivula iDashlane ngegama lokugqitha ekufuneka ndilikhumbule kwaye liza kundizalisa ngokuzenzekelayo. I-Dashlane ikwonga ngokuzenzekelayo kwaye igcwalise ikhadi lamatyala kunye nolwazi lweedilesi kwizixhobo zakho, kwaye ine-VPN yokubethela ukugcwala kwakho kuthungelwano lukawonke-wonke lwe-Wi-Fi ukuba uyafuna. Ukuba uluhlobo lomntu onokukhumbula iimpawu ezingama-20 ezizodwa, iipaswedi ezizaliswe zizithonjana kwiiwebhusayithi ezininzi ezahlukeneyo, ndiyavuyisana nawe.
Kodwa ukuba awuyongongamileyo ngoko ukhetho lwakho ngokusisiseko: sebenzisa iipassword ezingakhuselekanga okanye usebenzise umphathi wegama eligqithisiweyo. Ngoku ungasebenzisa amanqaku eposi kwimonitha yakho njengomphathi wegama eligqithisiweyo ... okanye ungasebenzisa iDashlane evelisa, egcina kunye nokugcwalisa ngokuzenzekelayo iipaswedi ezinde, ezikhuselekileyo nezingafaniyo kwindawo nganye.
Ungaphindi uzame ukufaka iphasiwedi enamanani angama-20 kunye neesimboli kwifowuni yam zonke izixhobo zam, ngeWindows, Mac, iPhone, Android, zonke ngokuzenzekelayo. Inokudityaniswa kwiChannel, Firefox, Edge, Safari, Opera kunye nakwiInternet Explorer. Kwaye nangona yonke into ivumelanisiwe efini, uDashlane uqobo akazazi ukuba zeziphi ezi passwords kwaye, ngenxa yoyilo lwayo lokhuseleko, akanakuze aziqonde.
Ndiza kuchaza ukuba kwixesha elizayo. Ke: dashlane.com/tomscott kuvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 lwe-Dashlane Premium ebandakanya ukugcinwa kwegama eligqithisiweyo kunye nokuvumelanisa.
Kwaye ukuba uyathanda, ungasebenzisa ikhowudi 'tomscott' ngesaphulelo se-10%.
Leliphi elona gama likhawulezayo emhlabeni?
Esona santya siphezulu sokuchwetheza sabhalwa ngo-216amagamangomzuzu (wpm), ebekwe nguStella Pajunas ngo-1946, esebenzisa umatshini wokubhala wombane we-IBM. OkwangokungokukhawulezaUmchwepheli wolwimi lwesiNgesi nguBarbara Blackburn, owafikelela kwincopho yokuchwetheza nge-212 wpm ngexesha lovavanyo ngo-2005, esebenzisa ikhibhodi eyenziwe lula iDvorak.
Uneenkanuko ezimbini ebomini: izilwanyana zasendle kunye nesantya. Ngokudibeneyo, ndiyazi, kodwa nganye inezayo ...
Okwangoku, uJames uyafudumala ukudibanisa ezi zinto zimbini kwimiceli mngeni omnye! Ufuna ukubaleka izidalwa ezininzi emhlabeni kangangoko anako. Uza kuhamba njani kude ngobukumkani bezilwanyana? Masifumanise! Uxolo Jimmy, kodwa iingxaki azilunganga. Abantu abakhawulezi kangako.
Njengawo wonke umntu, uJames uhamba ngesantya esilinganiselweyo se-5 km / h. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezi - sele ekhawulezile kunabanye abahlali basemaphandleni. Izinambuzane nezinye izinambuzane, umzekelo, zikhawuleza nje ngenxa yobukhulu bazo obuncinci.
Nawuphi na kubo! Ngokwenene? Nditsho iimillipedes zendlu? Ezi zilwanyana zincinci zihamba ngokukhawuleza ebusuku! Khawuleza ...
Ezinye izilwanyana ezinobungakanani obuthelekisekayo ebantwini, ezinjengeesloths, iioala kunye neenqanawa ezinkulu, nazo ziya kusala ngasemva. IiSloths zihlala apho zisengozini yokuhamba ngokukhawuleza kuba amarhamncwa aya kuzibona. Ke uhamba ngesantya esidangeleyo se-0.15 yeeyure ngeyure.
Kwaye iifudo ezinkulu ziwotshi ubuninzi beemayile eziyi-0.3 ngeyure. Kodwa ezi zilwanyana ziphakathi kwezona zicothayo kwiplanethi yethu.
Ke ngoku lixesha lokuba uJimbo abeke izihlangu zakhe ...
UJames ulungile kwaye ebelungiselela olu suku bonke ubomi bakhe. Ke i-15 mph yinto nje yokubaleka kuye, nokuba sisantya esiqhelekileyo abanye abantu ababaleka kuso. Kodwa eli nqanaba lilungile kuthi kuba sonke sineebugs eziyingozi ezifana neempuku kunye neempuku, kunye nazo zonke izigcawu kunye neenyoka emhlabeni! Umntu okhuphisana naye ophambili apha yiRacerunner enemigca emithandathu- igama elihle kwiliziza elinokubonakaliswa nguJames ukuba akazukuqhubeka njani.
Uh-oh! Khawuleza, mfo! UJames ufuna ukufumana amanqanaba aphezulu okuhamba kwezilwanyana. Ke uyizisa kwisantya seOlimpiki. Iimayile ezingama-28 ngeyure -esona santya sibaleka ngokukhawuleza sakha sabhalwa emntwini.
Izilwanyana ezinjengeendlovu, oonomatse, kunye neebhere ezibandayo ziyema ngasemva kumqolo womhlobo wethu okhawulezayo wokuphefumla yindawo engaqhelekanga apho umntu angabaleka khona ibhere emhlophe, kodwa ayizukuthatha thuba lide ngokuchasene neGr. Kulula ukuphosa ubusi ukumphazamisa! Kulapha apho uSlim Jim ethatha isigqibo sokujongana nenyani- isantya asisiyonto yomeleleyo kuluntu.
akhawunti.live.com.sign in 0x87dd0019
Kodwa bubukrelekrele nobukrelekrele! Unoko engqondweni, uJames utsibela ibhayisekile. .40 mph - malunga nesantya esiphezulu anokufikelela kwibhayisikile ngaphandle koncedo lwemoto.
Kwanele ukubaleka kuzo zonke iibhere kunye neenkontsho ezinje ngoodyakalashe, izinja kunye neengcuka. Kodwa akangekhe afumane i-bay hare-banokufikelela kwisantya seekhilomitha ezingama-48 ngeyure. Kodwa, ke, ubuncinci uJames uphumelela ugqatso ngokuchasene nekati yendlu eqhelekileyo.
Kuthekani ngabazala babo abakhulu abalawula amathafa engca aseAfrika? ...
Iingonyama zinokubaleka i-80 yeekhilomitha ngeyure-efanayo kwindawo yokutya eziyithandayo: i-blue wildebeest. Amahlosi akhawuleze nge-100 km / h. Kwaye ke intshatsheli epheleleyo yezantya eziphezulu kule planethi- ingwenkala.
Ukuprinta ithafa kwi-120 km / h kubalulekile kwezi zilwanyana zizingela ngokukhawuleza i-pronghorn antelopes. Ezi zidalwa zineempondo zinokuyibetha ngokulula ingonyama kumdyarho weembaleki! Ukufikelela kwisantya sengwenkala, uJames akanakho ukuthembela kuphela kumandla kunye nonyamezelo lomzimba wakhe. Kweli tyeli ungena emotweni.
Akukho nto ibengezelayo okanye ekhawulezayo- i-limousine elula enokuthi ikwazi ukuphatha ngokulula isantya sendlela. Kodwa thina bantu siphuhlise oomatshini bezolimo abangoyikiyo. Iimoto ezibalekayo ezinamandla kunye neenqwelo moya ezinokuphula isithintelo sesandi ngesantya esiphezulu se-765 mph! Ndicinga ukuba siyaliphumelela idabi emhlabeni ngobuchwephesha.
Kuthekani ukuba uJimmie Boy ucela umngeni kwezinye izilwanyana ezivela elwandle? ...
Kwakhona, akanakuyenza ngaphandle kwezinto eziyintandokazi zoluntu. Kunzima kakhulu kuthi ukuba abantu bahambe phantsi kwamanzi kuba kunzima ngakumbi kunomoya kunye nokuma komzimba okuhamba ngakumbi ngesantya, kunye neetorsos zethu ezinobunzima kunye neengalo ezinemilenze kunye nemilenze asinako oko kuthatha! Nokuba zingaphi iinwele ezisigubungelayo ...
Ewe, qabane ulinde ntoni? Ngena ngaphakathi! Isantya esiphezulu uJames anokulindela ukufikelela ngaphandle kwamaphiko yi-3 mph kuphela. Akunzima ngokwaneleyo ukudada ii-eels ezidlulileyo. Kodwa ihamba ngokulula oononkala kunye neenkwenkwezi.
Ewe, duh-abahlali basemhlabeni akufuneki nokuba bahambe uninzi lobomi babo. Abangoyena bagqatswa banamandla phaya ...
kodwa linda, yintoni? kude emva kwakho Into engunxantathu iphuma emanzini. Ingaba lonto yi ...
ukrebe? Khawulezisa uJim, nxiba isuti emanzi! Ukubhukuda okungcono ebomini bakho !!! Iimpiko ezinyaweni zakhe, uJamescan uqubha ngokukhawuleza kakhulu ngoku: 8 mph. Kuyafana nokubanakho kwezokudada kwezilwanyana ezininzi zomhlaba kwaye kunokugqwesa uninzi lweephengwini kunye nee otter zolwandle. Kodwa abamhlophe babamba ngokukhawuleza! Kwaye ayimangalisi loo nto- bahamba iimayile ezingama-30 ngeyure! Zilungile ezinyaweni zakhe! Kuthatha kuphela imizuzwana ukuba bavule imihlathi yabo ebanzi kwaye ...
oh, andikwazi kujonga! UYakobi? Ungu ...
Kulungile? Ewe, awukrelekrele?!? Okanye unethamsanqa ...
Utsiba kweso sikhephe ngomzuzu wokugqibela! Ngoku ihamba kakuhle nge-18 mph. Kuyavunywa, abaMhlophe baMhlophe banokuqubha ngokukhawuleza okukhulu, kodwa kuphela kukuqhekeka okufutshane. Yabona? Sele udiniwe; isikhephe sikhawuleza ngaphezu kweminenga, iingonyama zolwandle kunye neentlanzi ezincinci, kodwa uJimmy Crack Corn ukulungele ukuphakama.
Ngeli xesha ukhwela kwinqanawa enkulu yokuhamba ngenqanawa. Iinjini zayo zokugquma ukuva iindlebe zinokukhawulezisa le hulk yesinyithi ukuya kuthi ga kwiimayile ezingama-35 ngeyure, ishiye i-barracudas, ihlengethwa kunye ne-octopus ngasemva. Ewe, ezi zidalwa zinemilenze esibhozo zinokudada ngokumangalisayo ngesantya seekhilomitha ezingama-40 ngeyure! Kubonakala ngathi lixesha lokuthatha lo mngeni kwinqanaba elitsha.
UJames ufumana isikhephe esihamba ngesantya esiphezulu kunye nezabhokhwe emanzini nge-150 km / h. Unonophelo, mfondini! Musa ukungqubeka! Kwaye ndiyavuyisana! Uhamba ngokukhawuleza okukhulu kunemitha, enokufikelela kwi-80 km / h kuphela. Ewe ewe, kwaye ufumene eyona ntlanzi ikhawulezayo kwihlabathi: i-seilfish, eneewotshi ezili-110 km / h.
Ekuphela kwento intshatsheli yethu ekusafuneka yoyise lizulu. Ukuthetha ngamandla omntu okubhabha ayisiyoqhuko. Ngaba ukhetha ukubetha emanzini, esibhakabhakeni, okanye emhlabeni kwimoto yentonga eshushu? Ndazise apha ngezantsi! Nokuba yeyiphi indlela, uJames ufuna into kwasekuqaleni ukuyimisa.
Kubonakala ngathi waya kwijetpack kuba ngubani ongayi kukhetha? phakathi kweerekhodi ezibhabhayo. Onke amahobe, oongqatyana kunye neeblackbird zicotha kakhulu ukuba zikwazi ukuqhubeka. Ngoku ubhabha ngookhokho! Ukuchaneka, i-peregrine falcon, enokubhabha ngokuthe tyaba ngesantya esiphakathi kwe-56 mph kodwa inokuya kwi-69 mph.
Kukho izidalwa ezinamaphiko akhawulezileyo, njengokhozi olunempandla, oluhamba nge-75 mph Iimpukane zomoya nakwi-99 ukuba uzama ngenene. I-Needletail enomdla i-105 mph. Konke oku kuya kwanela nje ukonakalisa usuku lukaJames ngonaphakade, ukuba bekungekho ngenqwelomoya encinci ayiqeshele umsitho.
Ngoku ubhabha i-240 mph kwaye kubonakala ngathi akukho nto inokumnqanda! Kodwa yimbangi endala kaJim, i-peregrine falcon ekhawulezayo ukubuyisa isithsaba. Bukela njengoko uJames esondela phambili, intaka iyabhabha nje xa itsibela emhlabeni nge-240 mph! Kufuneka akhawuleze aye kwisidlo sasemini! Kulungile kugqityiwe. Yiyeke, mfo.
Zipakishe nje izinto zakho ubhabhe ubuyele ekhaya ...
enye ijethi enkulu! Iyahamba nje, kodwa isantya esibonisa isantya sibonisa i-600 mph! Kwaye sineentshatsheli bantu! Akunarekhodi yobuqu ukuba ilungile, kodwa inye kuphela Uloyiso! Mhlawumbi umntu akanakuba ngoyena mntu ukhawulezayo emhlabeni, kodwa ubuntu bunokufikelela kwisantya ngokulula nje ukuba ungacingi ngaso nasiphi na esinye isidalwa esiphilayo. Kwaye namhlanje siyambulela uYakobi ngobungqina! Hayi, ukuba ufundile into entsha namhlanje, njengenqaku kwaye wabelana ngalo nomhlobo wakho! Kwaye amanye amanqaku apholileyo ndicinga ukuba uyakonwabela, cofa nje ekhohlo okanye ekunene kwaye uhlale kwicala eliqaqambileyo lobomi!
Ngaba ukuchwetheza ngama-50 wpm kulungile?
I-50 wpmiqwalaselwa ngabaninzi njengesihlwayoukuchwethezaisantya. Kukho, nangona kunjalo, typists ezikhawulezayo.
Ungasonyusa njani isantya sokuchwetheza ngaphezulu kwamagama alikhulu ngomzuzu.
Eli nqaku lelabaqalayo kunye nabasebenzisi abaphambili. Ukuba awusazi isantya sakho sokuchwetheza, yiya kwikhonkco kwinkcazo ukufumana umbono. Ibinjani inqaku lakho? Amagama angama-20 ngomzuzu? Amagama angama-50 ngomzuzu? Amagama angama-70 ngomzuzu? Amagama angama-90 NgomZuzu okanye Ngaphezulu? Nantsi itshathi yesantya sokuchwetheza ngokukhawuleza ukuze ubone apho ukhoyo; ngamagama alishumi ngomzuzu, isantya sakho sokuchwetheza sisezantsi komndilili kwaye kuya kufuneka ujonge kubuchule bokuchwetheza obuchanekileyo; ngamazwi angama-40 ngomzuzu, Ungumndilili oqhelekileyo ngoku.
Usenendawo ebonakalayo yokuphucula. Ngamazwi angama-50 ngomzuzu, ndiyavuyisana. Ungaphezulu komndilili.
Ngamazwi angama-60 ngomzuzu, esi sisantya esifunekayo kwimisebenzi emininzi yokubhala ephezulu. Ngoku unokuba yingcali yokuchwetheza. Ngamazwi angama-70 ngomzuzu, ungaphezulu komndilili; uya kuwufanelekela nawuphi na umsebenzi wokuchwetheza, ukuba nje ukuchaneka kokuchwetheza kulungile.
Ngamazwi angama-80 ngomzuzu, uyabamba. Nawuphi na umqeshi ofuna utayipa angathanda ukuba nawe. Ngamazwi angama-90 ngomzuzu, kunokwenzeka ukuba ungumdlali weqonga, umdwelisi weenkqubo, okanye ubuchule.
Nokuba yeyiphi indlela, uyenza kakuhle. Ngamazwi ayi-100 ngomzuzu okanye nangaphezulu, uku-1% ephezulu yochwethezi. Siyavuyisana nawe! Ke kutheni kubalulekile ukuba isantya sokuchwetheza ngokukhawuleza sibaluleke? Ngu-2018 kwaye sihlala kwi-intanethi apho sichitha ixesha lethu elixabisekileyo ngokuchwetheza izimvo, ii-imeyile, amanqaku kunye neeblogi.
Ukuba ungayigqiba incwadi ngamagama angama-20 ngomzuzu ngeentsuku ezintathu, ungayigqiba ngamagama angama-60 ngomzuzu ngosuku olunye. Ukuchwetheza ngokukhawuleza kuya kukugcinela ixesha elininzi kwaye kukuncede ebomini. Ukuchwetheza ngokukhawuleza akuvumeli ukuba ubhale ngokukhawuleza kwaye ugcine ixesha, ndicinga ukuba kunokukunceda ube ngumbhali ongcono.
Molweni bantu, le Kunal Sehgal kwaye ujonga ii-kite hacks! Ke, ukuze uchwetheze ngokufanelekileyo, kufuneka uqale ufunde ukubeka iminwe yakho kwikhibhodi. Kuya kufuneka uyisebenzise yonke iminwe yakho ukuchwetheza ngokuchanekileyo. Ukuba ujonga ngokusondeleyo kwikhibhodi yakho, uya kubona i-bump encinci kwiqhosha 'F' kunye 'J'.
Ezi zivumba zikuvumela ukuba ubeke izandla zakho kwikhibhodi ngaphandle kokujonga. Kuya kufuneka ubeke isalathiso somnwe wakho wasekhohlo nasekunene ngaphezulu kwamaqhosha 'F' kunye 'J' kunye nomnye umnwe kwizitshixo ezikufutshane. Iqhosha ngalinye licinezelwe ngomnwe kumqolo wokuphuma okufutshane.
Emva kokufikelela kwisitshixo esingaphandle komqolo wasekhaya, umnwe kufuneka ubuyele kwiqhosha lalo lomqolo wasekhaya. Ibha yendawo: Uninzi lwabantu basebenzisa ubhontsi wabo wasekunene kwibar yendawo. Abantu abangasekhohlo banokukufumanisa kulula ukusebenzisa ubhontsi wabo wasekhohlo.
Nokuba ukhetha ukusebenzisa siphi isithupha, ungaze uzisebenzise zombini izithupha. Gcina isihlahla sakho siphakame kwaye sithe nkqo njengoko uchwetheza. Ukubeka isihlahla sakho ekuphumleni kwesundu okanye kwidesika kudala i-engkward angle eyenza kube nzima ukuhambisa iminwe yakho.
Oku kukhokelela kwiimpazamo kwaye kukucothisa. Ukugcina isihlakala sakho siphezulu kakhulu kuyonyusa uxinzelelo emagxeni akho. Hlala nkqo neengqiniba zakho kufutshane nomzimba wakho.
Zama ukugcina amagxa akho, iingalo, kunye nezandla zikhululekile ukunqanda uxinzelelo kunye nokungonwabi. Isitulo sakho kunye nokuphakama kwekhibhodi ukwenzela ukuba iingqiniba zakho zikwi-90-degree angle kwaye iingalo zakho zisondele emacaleni akho. Ingalo yakho kufuneka ixhomeke kwindawo ekhululekile.
Ngamagxa akho azingelwe ezindlebeni zakho, nyusa isitulo sakho ukuphakama okanye wehlise ikhibhodi yakho. Ukukunceda ukuba ufunde ndikunika ikhonkco lokukhuphela kwisoftware yokufundela eyi-Master. Ke khuphela nje kwaye uyifake kwi-PC yakho.
Ngale software, ungafunda ngokuchwetheza esisiseko kunye nokufezekisa isantya sokuchwetheza ngaphezulu kwamagama alikhulu ngomzuzu ngokunika nje ixesha elincinci kwisifundo ngasinye suku ngalunye. Ukuba usaqala, qala uthayiphe kuqala. Kule khosi, uya kufunda ukuchwetheza ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo ngaphandle kokujonga ikhibhodi ngayo yonke iminwe elishumi.
Ukwenza ukhetho lwesatellite kuya kulandelela ukuchwetheza kwakho xa uchukumisa i-PC yakho, uyihlalutye kwaye ubonelele ngoqeqesho ekujolise kulo kumaqhosha akho anzima namagama. Nje ukuba ugqibe ikhosi yokuChwetheza ngokuChukumisayo, ukulungele ukuqala ikhosi yokwakha ngesantya. Kwikhosi yesantya sokwakha, uya kugxila kwizitshixo zeminwe ethile kunye nokukhawulezisa iminwe yakho njengoko uchwetheza amagama aqhelekileyo.
Iikhosi zokugqibela ekufuneka uzenzile ngamanani, abalinganiswa abakhethekileyo, kunye nezifundo ezilishumi zebhodi yezitshixo ukukunceda ufake amanani kunye nabalinganiswa abakhethekileyo usebenzisa ubuchule obuchanekileyo. Nje ukuba usigqibe isifundo sakho, uya kuba nesantya esingaphezulu kwamagama angama-40 ngomzuzu. Ngoku into ekufuneka uyenzile kukuziqhelanisa nokuziqhelanisa kwaye uya kufumana amagama ali-100 ngomzuzu wokuchwetheza ngesantya ngaphandle kokubambeka naphi na phakathi.
Gxila ngakumbi kukuchaneka kunokuba uthethe ngokutyibilikayo! Ukukhawuleza akunamsebenzi ukuba uqhubeka usenza iimpazamo apha naphaya. Ngalo lonke ixesha khumbula ukucwangcisa umsebenzi wakho, emva koko usebenze kwisicwangciso sakho! Zininzi izinto zokuchwetheza phaya, nkqu nenkqubo yokuChwetheza, ukukunceda ukhawuleze. Yenza onke ama-20.
thatha ikhefu ukuya kwimizuzu engama-30 ngelixa uchwetheza ukuze uphumle. Ngokuhamba kwexesha, unokuziqhelanisa neendlela ezahlukeneyo zokubhala kunye nemikhwa emibi. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ulandela ubuchule bokubhala obuchanekileyo.
Ekuqaleni, unokucinga ukuba obu buchule abusebenzi, kwaye ungafumanisa ukuba eyakho indlela iyakhawuleza, kodwa kufuneka ubambelele kwindlela echanekileyo yokuchwetheza ukuze uqhelane. Oku kukuvumela ukuba wandise isantya sakho sokuchwetheza kwi-keyboard ukuya kuthi ga kwigama eli-100 ngomzuzu. Ndiyathemba ukuba uyithandile kwaye ukuba uyayithanda inqaku lam kwaye ubhalisele itshaneli yam.
Oku kungabhaliswanga nguKunal Sehgal kwaye siza kukubona ngokulandelayo qho xa ndifaka inqaku elitsha *
Kuthatha ixesha elingakanani ukufunda ukuthayipha i-80 wpm?
Kuthathe iintsuku ezingama-20 ukusuka kwi-zero ukuya kwi-zeroI-WPM engama-80(Iiyure ezingama-20 zokuziqhelanisa). Kuthathe iintsuku ezingama-45 ukusuka kwi-zero ukuya kwi-100I-WPM(Iiyure ezingama-52 zokuziqhelanisa).NgoFebruwari 25 Ngo-2017
Ndingasibona njani isantya esiphezulu senkqubo yam?
Unzip ifayile kwaye ucofe kabini ifayile ye-DMG ukufaka i-Intel Power Gadget. Khuphela kwaye ufake iPrime95. Ukuba ufuna ukubona isantya esiphezulu senkqubo yakho, kuyakufuneka ubeke umthwalo onzima kwi-CPU. Enye yeendlela ezaziwayo zokwenza oku kukusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-Prime95. Ungayikhuphela simahla kwi-mersenne.org/download/.
Ungasibala njani isantya sekhompyuter?
Ezi zinto zezona zinto ziphambili xa ujongene nesantya sekhompyuter kunye namandla. Ukuthatha konke oku kunye nokunikezela ixabiso lexabiso ngalinye kunokusinika isiseko esifanelekileyo sekhompyuter kwaye kusivumele ukuba sikwazi ukubeka ezi khompyuter kunye kwaye (ithiyori) kuvavanye isantya namandla ayo nganye. I-BR = Inkunzi (inkunzi yegusha ebhodini-okt.
Isantya seprosesa siyichaphazela njani inkqubo?
Isantya sakho se-CPU sigqiba ukuba inkqubo yakho inokwenza imisebenzi ngokukhawuleza kangakanani. Isantya se-CPU asibalulekanga kangako kunangaphambili, enkosi ngokuza kweeprosesa eziphambili.
Yeyiphi eyona processor ilungileyo kwintengiso?
Umbhali weOpenOffice unazo zonke izinto eziyimfuneko ukuzenza nakuluphi na uluhlu lweeprosesa zamagama ezilungileyo. Kwaye kukho ukhetho oluphathekayo ukuze usebenzise inkqubo ekuhambeni nge-flash drive.